In ka badan 800 oo qaabab la hubiyey iyo xariijimo | Abuurista khadka tooska ah
¿Estás buscando qaababka con rinjiyeynta o xargaha si saafi ah qaabka dharka miiska? ;) Hagaag, waxaad timid meeshii saxda ahayd! Halkan waxaad ka heli doontaa in kabadan 800 oo qaab jeeg ah oo xariijin ah oo qaabab kala duwan ah iyo dhamaanba noocyada kala duwan ee aad kala soo bixi karto kuna isticmaali karto naqshadahaaga bilaashka ah.
Ragga ku jira Naldz Graphics, oo had iyo jeer sameeya isku soo aruurinta cajiibka ah, ayaa maanta nagu farxay isku soo uruurinta weyn In kabadan 50 xirmooyinka qaabka lacag la’aan ah qaabkan.
Sidoo kale, bilowga maqaalka aan kaaga tagayo adiga oo halkan ku xiran, waxaad leedahay 5 xiriiriya iskuxirka qaababka qaababka kale: 250 qaab joomatari, 100 qaab ubax, 40 qaabab cagaaran oo qaabab kala geddisan leh iyo ugu dambayn ururinta qaababka huruudda ah ee qaababka kala duwan.
Si aad u soo dejiso qaababka la jeexjeexay iyo kuwa xariijimaha leh waa inaad gashaa iskuxiraha soo socda oo guji sawirka matalaya xirmo kasta ama qaab kasta ama khadadka aad ka heli doontid sawir kasta hoostiisa oo leh cinwaanka "Soo Degso".
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maamulayaasha » In kabadan 800 oo qaabab jajab iyo xarigyo leh
31 Tusaalooyinka isticmaalka midabada madow ee naqshadeynta websaydhka